Fanjakana tan-dalàna… soatoavina | NewsMada
Fanjakana tan-dalàna… soatoavina
Miova mpitondra, miova sata. Anisan’ny fanambin’ny fitondrana amin’izao ny famerenana ny hasin’ny fanjakana. Ao anatin’izany, ohatra, ny fampanjakana ny tany sy ny fanjakana tan-dalàna, ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra. Mby aiza? Mba tena misy sy iainana ny fanajana sy ny fampiharana lalàna.
Tena irosoana sy itozoana amin’izay ny tany sy ny fanjakana tan-dalàna amin’ny hoe fanovana? Mba tsy ho am-boalohany ihany izay atao fa haharitra sy ho raiki-tampisaka eo amin’ny tsirairay sy ny rehetra; mba tsy ho amin’ny sokajin’olona sasantsasany ihany fa ho an’ny sehatra sy ambaratonga rehetra… Nahoana?
Mbola tarazo ratsy tsy mahafa-bela saika amin’ny sehatra sy ambaratonga maro ny hetsika am-boalohany ihany. Toa zary fisehosehoana sy fisekosekoana ho manao sy mahavita zavatra ihany: tsy mitohy sy tsy maharitra, tsy lalim-paka sy tsy mahahenika ny rehetra. Nahoana? Izay ilay hoe fahazarana hatramin’izay.
Tsy mbola tena faharesen-dahatra anaty eo amin’ny tsirairay ny maha zava-dehibe ny fanajana sy ny fampiharana lalàna fa mijanona ho tahotra. Eny, na tahotra aza no hoe voaloham-pahendrena. Tahotra mpitandro filaminana, tahotra fitsarana, tahotra sazy, tahotra fonja… Miara-dalana amin’izany ny tahotra ho afa-baraka.
Rahoviana vao ho soatoavina sy ho ao anatin’ny kolontsaina ny fanajana sy ny fampiharana lalàna? Toy ny tahotra tsiny sy ny tody, ohatra. Amin’izay, mandeha ho azy ary fahafinaretana sy voninahitra aza ny fanajana sy ny fampiharana lalàna. Tsy misy fanahiana, tahotra, fanerena, tsy fifampitokisana, fifampiandrasana kendry tohina…
Amin’izany ihany koa, hajaina sy ampiharina ny lalàna na iza mahita na tsia, na iza hanaraka na tsia… Rahoviana vao ho soatoavina ny fanajana sy ny fampiharana lalàna? Mba tsy ny fomba no atao ho lalàna fa lalàna no atao ho fomba. Amin’izay vao tena misy sy iainana ny hoe fanjakana tan-dalàna… ho fanovana sy ho fiovana?